Munamato weKukweretwa Kwechikwereti uye Kuputsa Kwemari | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Munamato weKukweretwa Kukweretwa uye Kuputswa Kwemari
Nhasi tichange tichinamata nemunamato wekudzima chikwereti uye kubudirira kwemari. Izvi zvinhu zviviri ndizvo chikonzero chekudzosera kumashure kwevanhu vazhinji munyika yanhasi. Vamwe vanhu vazhinji vari mukati chikwereti nekuti ivo havana kusangana a kubudirira kwemari. Vane dambudziko rekuve neyakagadzikana nzira yemari, ndosaka vasingakwanise kutenga zvinhu vega kunze kwekunge vapinda muchikwereti. Zvichakadaro, harisi zano raMwari rekuti vanhu vave nechikwereti, hachizi chimwe chikamu chehurongwa hwaMwari kuti vanhu vanzwe kukundikana kwemari.
Iri kuronga kwaMwari kuti isu tese tirarame hupenyu hwakanaka. Kunyangwe zvisingaite kuti munhu wese ave mupfumi zvakaenzana, Mwari achiri kuda kuti isu tirarame hupenyu hwakagadzikana apo isu tinokwanisa kutenga zvinhu tiri toga, hupenyu hwatichashanda nekukohwa mubairo wekushanda kwedu zvakawanda. Ndokusaka rugwaro ruchiti mubhuku Mapisarema 37:21, Wakaipa anokwereta asi asingadzore, asi akarurama ane rupo uye anopa. Ndiwo chete akaipa anokwereta achifunga kusazombodzorera, asi iko kuda kwaMwari kuti wakarurama ave nerupo uye ape vanhu panzvimbo yekukwereta.
Nekudaro, muvengi nguva zhinji anomirira mukorodhi yekubudirira kwemari kutadzisa vanhu kubva mukunakirwa nehurongwa hwaMwari hwehupenyu hwavo. Muvengi anotora kubva pamurume rusununguko rwemari nekudaro achikanda murume muchikwereti. Mwari anoda kudzorera rusununguko rwemari kuvanhu, uye anoda kubatsira vanhu kugadzirisa zvikwereti zvavo. Ndosaka mweya waMwari watitungamira kuti tisvitse munamato wekudzimwa kwezvikwereti uye kufambiswa kwemari.
Kunyangwe kana iwe uchinzwa kuti iwe unoda iyi minamato, edza kutora nguva yako mukuridzidza, inzwa wakasununguka kugovera nevanhu vaunoda uye vane hanya zvakanyanya nezvebudiriro yavo yemari.
Ishe Jesu, rugwaro runoti mupfumi anotonga pamusoro pevarombo, uye anokwereta anova muranda weanomukweretesa. Ndinoramba kuva muranda, Ishe Mwari. Ndinotema kuti ndasununguka kubva kuzvikwereti muzita raJesu. Mwari baba, hakusi kuda kwenyu kuti hupenyu hwangu hutongwe kana kuve munhu ari pasi; mandigadza madzimambo pakati pevanhu, handigoni kuva nhapwa kune mumwe. Pachinyorwa ichi, ndinonamata Ishe Mwari kuti mugare zvikwereti zvangu zvese muzita raJesu.
Baba Ishe, Makataura mushoko kuti sewe, uye zvatiri, uye ndinoziva pachako kuti iwe hauna kuverengerwa kune chero murume. Ishe Mwari, ndinonamata kuti nemvumo yekudenga, munondisunungura kubva muuranda hwezvikwereti muzita raJesu. Jesu Kristu weNazareta, ndinonamata kuti netsitsi dzako, udzore zvikwereti zvangu zvese nezita rako dzvene. Zvese zvandinazvo chikwereti munzvimbo yemuviri uye chikwereti chose chandinacho munzvimbo dzomweya, ndinonamata kuti muvadzime muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndingaite sei kuti ndisununguke pachikwereti ini ndisina rusununguko rwemari. Ndinonamata Ishe Jesu kuti muchandidzidzisa maitiro ekuita mari. Rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti zano rese rakanaka rinobva kwamuri Mwari, ndinonamata kuti muchandipa iyo pfungwa yandinofanira kushandisa kuita pfuma isingaenzaniswi muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndasvika pakunzwisisa kuti hatiite hupfumi nemari yatinowana. Isu hatiwane kutonga kwemari nekukura kwakaita mari yedu. Isu tinowana budiriro yezvemari nemari yakawanda yenyasha dzatinowana kubva kuna Mwari. Ishe, ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzive pamusoro pehupenyu hwangu kubva zvino nemuzita raJesu.
Masimba ese nehumambo dzakasungirirwa nekurovera padanda, ini ndinoshevedza moto waMwari Wemasimbaose pamusoro pako chaipo, tanga kupisa kumadota muzita raJesu. Ini ndinokuraisa muzita riri pamusoro pevamwe kuti iwe urase simba rako pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti, iye akasunungurwa nemwanakomana akasununguka zvirokwazvo, ini ndinozivisa nerusununguko kubva kumweya wehurombo hwemari, simba rese rinokanganisa kuedza kwevanhu nekutadza, simba rega rinokanganisa simba revanhu kuita hupfumi, ini kuparadza mweya yakadaro muzita raJesu.
Chinyorwa chinodaro, uye ivo vakamukunda neropa regwayana, uye nemazwi ehupupuriro hwavo, ndinopupura kuti ndakasununguka kubva mukushomeka kwemari. Ndinozivisa rusununguko kubva kumatambudziko emari, uye ndinoraira kuti muzita raJesu, ndinosunungurwa kubva kumatambudziko emari muzita raJesu.
Chero simba rinogona kuda kundikanda muchikwereti simba rese rakapika kuti ini handisi kuzosununguka mune zvemari, simba rega rega rakapika kuti handife ndakasangana nekubudirira kwemari, ini ndinokuraira kuti iwe unorasikirwa nemasimba ako muzita raJesu. Imi mose masimba edzimhosva nehumambo, mweya yega yega yedhimoni uye yemadzitateguru akaiswa kuti ushandise simba rangu rese risingabatsiri, simba rese rakapihwa kwandiri kuti riite kuti ndishande senzou uye ndinokohwa svosve, ini ndinouya kuzokurwisa zita raJesu.
Ndinosimudza chiyero chinopesana nemwi mese masimba eMarine, imi mese madzitateguru nemasimba ese epasi pano anofamba achiparadza hupenyu hwevanhu uye magumo nechikwereti nenjodzi yemari, ndinokupisa nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.
Ini ndinonamatira murume wese uye mukadzi anoda kurongeka kwemari. Ini ndinonamata kuti rubatsiro ruuye kwavari muzita raJesu. Vanozowana rubatsiro kwavanonyanya kutarisira. Rubatsiro rwemari ruchasimukira ivo munzvimbo dzavanga vasingatarisiri, uye iwe uchavesa korona kwavo kuita kwakawanda kubudirira muzita raJesu.
Previous nyayaKurumidza Kunamatira Kwekuporesa
inoteveraMunamato wekuporesa Nemavhesi eBhaibheri
Agama Anasta Kouamé Ndira 25, 2021 At 10:11 pm
Ja'a ce que vous faites. Merci
Jane Chivabvu 18, 2021 nenguva dza 12:07 pm
Chikwereti changu chinganyorwe neminamato here?